Jiosy malagasy Info. About. What's This?
Jôsefa (vadini Maria)
Epistily ho anny Galatiana
ⓘ Jiosy malagasy
Ny Sabata izay atao hoe Shabbat na Shabbos aminny teny hebreo dia andro fitsaharana izay mifanandrify aminny andro fahafito aminny herinandro jiosy, izany hoe ny Asabotsy. Araka ny voalaza ao aminny Baiboly dia nasainAndriamanitra notandremanny Zanaki Israely ny andro Sabata.
Ny Asabotsy na Sabotsy dia andro fahenina ao aminny herinandro manomboka aminny andro Alatsinainy, fa andro fahafito kosa ao aminny ny herinandro manomboka aminny andro Alahady. Aminny Malagasy mandala ny nentin-drazana dia andro fahatelo izy raha manomboka aminny Alakamisy ny herinandro. Tany Gresy fahiny ny andro Asabotsy dia antsoina hoe κρονία / kronia ka natokana ho anny andriamanitra Satiorna. Izany no mahatonga ny andro Asabotsy hatao hoe Saturday aminny teny anglisy, izany hoe "Androni Satiorna". Ny teny malagasy hoe Asabotsy na Sabotsy dia avy aminny teny arabo hoe السبت / as-sabt ...
Ny Bokin’i Nehemia dia boky ao amin’ny Tanakh sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Mitantara ny fikasan’i Nehemia hanangana ny manda efa nirodana indray ny boky. Araka ny voasoratra ao dia nanendry an’i Nehemia ho governoran’i Joda i Artakserksesy, mpanjakani Persia, mba hahatanterahany ny faniriany nefa nisy ny tsy nankasitraka izany, dia Jiosy sasany sy ireo governoran’ny tanàna nifanakaiky taminy. Vita ihany ny manda. Nanao fanarenana ara-tsosialy sy ara-pivavahana i Nehemia. Tanatin’ny roa ambin’ny folo taona no nanatanterahany izany rehetra izany. Rehefa niver ...
Ny tetiandro samaritana dia tetiandro ampiasainny vahoaka atao hoe Samaritana. Ny Samaritana dia milaza ny tenany ho taranaky ny Istaelita nonina tao aminny Fanjakani Israely avaratra izay resahina ao aminny Baiboly. Nisaraka taminny Jiosy izy ireo taminny taonarivo voalohany tal. J.K. Mampiasa ny Pentateoka izy ireo, ary ny fivavahana arahiny dia manana ny mampiavaka azy aminny jodaisma, ka isanizany ny tetiandro ampiasainizy ireo izay tsy mitovy aminny tetiandro jiosy. Tetiandro manara-bolana sy masoandro ny tetiandro samaritana ka sahalahala aminny tetiandro hebreo izay ahitana taona ma ...
Iahveh no anarana iantsoana ny Andriamanitry ny Zanaki Israely. Fanoratra ihany koa ny hoe Yahweh na Iahvé na Yahveh. Aminny Baiboly protestanta malagasy sy ny Baibolinny Vavolombeloni Jehovah dia ahitana ny hoe Jehovah. Ny Baiboly katolika malagasy talohanny farany dia ahitana ny hoe Iahve, fa ilay fanontana farany dia tsy ahitana anio anarana io intsony izay nosoloana ny hoe "Tompo". Ny Baiboly iombonana eto Madagasikara koa tsy ahitana io anarana io fa nanolo izany aminny hoe TOMPO. Ny Baiboly hebreo dia tsy ahitana afa-tsy ny renisoratra hebreo efatra יהוה izay azo soratana aminny lite ...
I Zakaiosy na Zake dia olona resahina ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly kristiana, izay voalaza fa mpamory hetra niova finoana ka lasa mpianatri Jesoa efa talohanny fanomboana azy aminny hazo fijaliana. Atao hoe Ζακχαῖος / Zakchaios izy aminny teny grika fa Zakkai izay midika hoe "marina" na "madio" kosa aminny teny arameana. Aminny teny frantsay dia atao hoe Zachée na Zacchée izy ka avy aminizany ny fanoratana hoe Zake ao aminny Baiboly katolika malagasy. Ny Baiboly protestanta malagasy kosa dia manoratra hoe Zakaiosy. Tahaka ani Matio Levy dia isanireo mpianatri Jesoa izy, ka ...
Ny jodaisma rabinika dia endriky ny jodaisma nipoitra avy aminny jodaisma farisiana taorianny faharavanny Tempolini Jerosalema taminny taona 70 taor. J.K. Taminny taonjato faha-2 hatraminny faha-6, izay fotoana nanombohana nandray azy ho endrika filamatry ny jodaisma, no niforonanny firafetany. Ny jodaisma karaita ihany, izay misy mpikambana vitsy, no tsy manaiky ny fivoasana ataonny raby, satria tany aloha dia tsy ekenny Samaritana izay rehetra tsy voasoratra ao aminny boky dimy ao aminny Torah. Aminny teny hebreo dia atao hoe יהדות רבנית / Yahadut Rabbanit ny jodaisma rabinika.
Ny batisa na batemy dia fomba andraisana ny olona ho mpikambana ao amin ny fivavahana iray, toy ny kristianisma sy ny jodaisma, izay tanterahina amin ny fampiasana rano natao handena ny loha fara-fahakeliny na ny tena manontolo. Amin ny ankapobeny, eo amin ny fivavahana kristiana dia atao amin ny anaran ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny batisa. Isan ny atao hoe sakramenta na fanomezam-pahasoavana ny batisa. Ny Filazantsara dia milaza fa i Jesoa koa dia natao batisa ka i Joany no nanao batisa azy.
I Jôsefa dia lehilahy jiosy izay lazain ny Filazantsara sinôptika fa taranak i Abrahama sy ny mpanjaka Davida. Fofombadin i Maria izay bevohoka noho ny asan ny Fanahy Masina ary avy naka vady an i Maria taloha kelin ny nahaterahan i Jesosy izy ka lasa ray mpitaiza an i Jesoa izy fa tsy ray niteraka azy. Asehon ny Filazantsara ho "lehilahy marina" izay nandray an i Maria sy ny zanany izy rehefa nandre ny hafatry ny anjely Gabriela. Mpandrafitra i Jôsefa, araka ny Filazantsara. Voaresaka ao koa ny niakarany tany Jerosalema tamin ny faha-12 taonan i Jesoa tany amin ny Tempoly ka izany no nire ...
I Nebokadnetsara II na Nebokadnezara II na Nabokôdônôzôra II dia mpanjakan i Babilona tanelanelan ny taona 605 sy 562 tal. JK. Nitarika ny tafika babilôniana izy rehefa hifarana ny fitondran i Nabopôlasara rainy ka tamin ny taona 605 dia resiny tao Karkemisa ao Siria ny Egiptiana. Nanafika matetika niankandrefana tany Siria sy Palestina sy Egipta ary Arabia izy. Resiny ny tafik i Jodà tamin ny taona 597 tal. J.K. ka azony i Jerosalema ary nentiny ho babo any Babilona ny mpanjaka Joiakima sy ny vahoakany maro koa. Nisy ny fikomiana nanohitra azy tao amin ny Fanjakani Jodà tamin ny taona 599 ...
Ny Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara, izay hafohezina aminny hoe Baiboly DIEM, dia fandikan-teny ny Baiboly ho aminny teny malagasy niarahanny mpandika teny malagasy avy aminny fiangonana vitsivitsy eto Madagasikara. Mikendry ny hanananny Kristiana miteny malagasy Baiboly tsy anavahana fiangonana ireo mpandika teny ireo no mikendry ny hahazoanny mpiteny malagasy ankehitriny ny tianAndriamanitra ho lazaina. Ampiasaina indrindra io dikan-teny io aminny vavaka iraisam-pinoana ataonireo fiangonana miray ao aminny Fiombonanny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara. Taminny taona 2003 ...
Ny Epistily ho anny Galatiana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Galatia dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao izay isanny atao hoe epistily. Taratasy nalefanny Apostoly Paoly ho anny fiangonana kristiana tany Galatia izany. Teo anelanelanny taona 50 sy 60 no nanoratana azy. Vao eny am-piandohanny taratasy i Paoly dia manambara ny tenany ho apostoly marina ary ny fampianarany dia fampianarana marina Gal. 1.1-10. Nisy mantsy ireo izay nilaza fa apostoly sandoka manao fampianarana tsy izy i Paoly. Ny asa famitana iraka ataoni Paoly dia avy amini Kristy sady nahazo f ...
Ny litera efatra IHVH na YHWH dia litera nenti-manoratra aminny tarehin-tsoratra latina ny anaranny andriamanitri Israely hoe יהוה araka ny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly. Ny fanononana ny teny asehonny renisoratra hebreo יהוה ao aminny Baiboly hebreo na Tanakh izay soratana aminny litera latina hoe IHVH dia tsy fantatra mazava, hoy ny mpino ao aminny jodaisma sy ny mpikaroka momba ny B aiboly sy momba ny teny hebreo maro. Tao aminny tempoly jiosy dia lasa fanao ny tsy manonona ny anaran Andriamanitra mba ho fanajana azy. Nanomboka tokony taminny vanimpotoanny fahababoana izany. Matet ...
Ny fanampinny Bokini Estera na tovanny Bokini Estera dia tsy hita ao aminny ao aminny Baiboly protestanta na ao aminny Baiboly hebreo. Ny Bokini Estera ao aminny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa no ahitana ilay tovana. Taminny teny grika ny sora-tanana ananana azy.
1.1. Jiosy malagasy ara-pirazanana Fanamarinana ny fisianny Jiosy malagasy
Zavatra isan-karazany no entin ny mpomba izany hevitra izany manohana ny fanambaràna ny maha Jiosy ny Malagasy sasany na ny ankamaroan ny Malagasy. Betsaka aminizany ny porofo miorina amin ny filazana fa misy fitoviany ny zavatra sasany momba ny Malagasy sy ny Jiosy:
andalan-tsoratra na singan-teny ao amin ny Baiboly heverin ny teôlôjiana malagasy sasany fa miteny mivantana na ankolaka ny fahafantaran ny Hebreo na ny Jiosy tany aloha an i Madagasikara,
ny kolontsaina malagasy sy ny an ny Jiosy,
ny lovantsofina momba ny fiavian ny foko sasany eto Madagasikara na ny fianakaviana sasany,
ny fitantarana fahitana vato sy zavatra hafa heverina fa voasoratra amin ny litera hebreo.
1.2. Jiosy malagasy ara-pirazanana Olana momba ny fanamarinana
Na dia azo heverina ho marina fa misy manam-piaviana jiosy ny Malagasy, noho ny fifaneraseran ny mponina eran izao tontolo izao hatramin ny Andro Taloha na talohan izany aza, dia betsaka ny olana ara-tantara, ara-kolontsaina, ara-pivavahana, ara-piteny sns izay mahasarotra raisina avy hatrany ny porofo anohanana ny maha Jiosy na Hebreo ny razan ny Malagasty sasany na ny Malagasy rehetra. Isan ireo:
ny tsy fahafantarana tamin ny vanimpotoan ny tantaran ny Malagasy ny sinagoga sy ny Sabata izay isan ny fototra eo amin ny kolontsaina jiosy;
ny fifanoheran ny porofo aroson ny antokon olona samy hafa izay samy milaza ny tenany fa Jiosy malagasy,
ny tsy fifanandrifiana ara-potoana misy eo amin ny lovantsofim-piaviam-poko sy ny tantara iarahan ny mpahay tantara manaiky momba ny tontolo jiosy sy semita, amin ny ankapobeny;
ny tsy nahalalan ny Malagasy ny teny hoe יְהוּדִים / Yehudim "Jiosy" na "Jody" sy עברים / ʿ Ivrim "Hebreo" na "Hebrio" izany talohan ny nahatongavan ny fivavahana kristiana teto Madagasikara; marihina fa ny Arabo dia manao ny Jiosy hoe يهود / Yahudi sy ny Hebreo hoe عبرانيون / Ibrani;
ny fanompoan-tsampy tafahoatra tamin ny vanimpotoana faha mpanjaka izay tsy nisy fihenany raha tsy taorian ny nidiran ny finoana kristiana teto Madagasikara;
2. Jiosy malagasy ara-pivavahana
Amin izao fotoana izao dia maro ny Jiosy malagasy izay tsy azo iadian-kevitra ny maha Jiosy azy amin ny alalan ny fiovana finoana ho amin ny fivavahana jiosy. Tsy ny fananana razambe na ray aman-dreny jiosy ihany fa ny fiovana ho amin ny jodaisma dia ampy haha Jiosy ny olona iray. Io fepetra io no mampalalaka ny fitomboan ny isan ny Jiosy malagasy ara-pivavahana. Nanomboka tamin ny taona 2010 no tena nahafantarana ny fisian ny Malagasy manaraka ny jodaisma. Ny maro amin izy ireo dia ao amin ny jodaisma mesianika, izay tsy eken ny Jiosy ho firehan ny jodaisma sady sokajîn ny mpahay tantaran ny fivavahana ao amin ny kristianisma. Vao tamin ny 2016 vao nisy Malagasy noraisina ho amin ny jodaisma mahazatra sady eken ny Jiosy.
fiteny malagasy Epistily ho an ny Romana izay hafohezina amin ny hoe Romana hoy ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan ny Kristiana malagasy tsy Katolika
tamin ny Jiosy atao hoe Akoila sy ny vadiny atao hoe Prisila. Nonina tao aminy i Paoly. Nankany amin ny sinagoga isan - tsabata mba hitantara amin ny Jiosy sy
Baiboly dia boky inoan ny Kristiana sy ny Jiosy fa Soratra Masina mirakitra ny tenin Andriamanitra. Ny Baibolin ny Jiosy na Baiboly hebreo, izay tsy ahitana
maro. Mitombo isa noho izany ny Jiosy malagasy ara - pivavahana. Amin izao fotoana izao dia mbola misy ireo Malagasy izay mampirafy finoana ka mampifangaro
hanadiovana ireo Jiosy na Jody nanambady vehivavy tsy Jiosy ny Bokin i Ezra. Mampiseho ny fomba nampihamatanjaka ireo rafitry ny fivavahana jiosy niforona nandritra
I Jesoa na Jesosy na Jeso dia Jiosy tany Palestina izay inoan ny Kristiana ho zanak Andriamanitra nirahina ho ety ambonin ny tany hanavotra ny olombelona
ankapobeny Malagasy vahoaka Tantaran i Madagasikara Mponina eto Madagasikara Zanaka am - pielezana malagasy any Frantsa Fifindra - monina jiosy taty Madagasikara
mba hahatanterahany ny faniriany nefa nisy ny tsy nankasitraka izany, dia Jiosy na Jody sasany sy ireo governoran ny tanàna nifanakaiky taminy. Vita ihany
telo ireo dia mifandray hentitra amin ny fety telo lehibe jiosy dia ireo Sheloshet Haregalim. Tetiandro hebreo Tetiandro miozolmana Tetiandro malagasy
noho izany ny Jiosy malagasy ara - pivavahana. Firenena ao Afrika Politika ao Madagasikara Tantaran i Madagasikara Kolontsaina malagasy Fivavahana eto
Baiboly protestanta malagasy 1965 sy ny Baibolin ny Vavolombelon i Jehovah dia ahitana ny hoe Jehovah. Ny Baiboly katolika malagasy 1938 talohan ny
tsirairay. Tany am - pahababoana any Babilona vao nanomboka ny finoan ny Jiosy na Jody ny maha andriamanitry ny firenena rehetra sy izao rehetra izao
Wikipedia: Jiosy malagasy
Baiboly Dikanteny Iombonana Eto Madag ..